UJames Ellroy, uPepe Carvalho Award kwi-BCNegra. Inja eMad kunye nam | Uncwadi lwangoku
Icandelo lethala leencwadi lam uEllroy.
Usuku oludlulileyo 1 umbhali waseMelika UJames ellroy uyifumene Imbasa kaPepe Carvalho kwi UMnyhadala weNoveli eMnyama Barcelona iyaphela namhlanje. Omnye wababhali behlabathi abaluleke kakhulu kuhlobo olo, uEllroy ukwangumlinganiswa kuye inkcazo ethi «Inja erhabaxa " Akuhambi ngenjongo. Ngoku a ushicilelo olutsha lwe Iikona zam ezimnyama, ibali lakhe lobomi limnyama kakhulu okanye lingaphezulu kwezo iinoveli zigoso, zixinene kwaye zingaphezulu komnyama kangangokuba ubhala.
Ngubani owaziyo ukuba uyazi ngam ibali lam lothando naye, eqala ekuqaleni kweli waka leminyaka. Ndiyamtyala inxenye elungileyo yam ukuthanda ngokupheleleyo uhlobo kuhlobo lwayo oluhlaza, olunogonyamelo kunye nolwe-visceral. Ndandinetyala kuye amagama ambalwa ixesha elide, ke namhlanje kukho inqaku kakhulu kakhulu.
1 Inja eMad
2 Inja eMad kunye nam
2.1 Umhlophe uBud
3 Kodwa kukwa ...
4 Kwaye ...
5 Iinoveli zakhe
Ndiyalonwabela ulwimi olungcolileyo, amapolisa abetha umntu ovalelweyo ...
Ndiyinkosi yenoveli yolwaphulo-mthetho.
UJames Ellroy, eBarcelona, ​​ngoFebruwari 2018
Ngo-Ellroy akukho mhlaba uphakathi. Nokuba banomdla okanye bayenyanye ngokulinganayo, njengombhali okanye njengomntu. Kodwa ukuba unomdla kuzo zombini ezi nkalo, UMFANEKISO. Ukuba eyakho Unxibelelwano loncwadi lwegazi, ulwaphulo-mthetho, urhwaphilizo lwamapolisa kunye nokususwa okungafunekiyo kobona bantu benyanyekayo, sele kunzima ukubaleka. Ukuba utyhafiswa nguye Uhlobo olwahlukileyo lwe-telegraphy kunye nokusika kwentamo ngaphandle kwe-anesthesia, Uya kusuleleka ngaphandle koncedo. Kwaye ukuba unomdla kwigalari ekhethekileyo yabalinganiswa, nganye nganye ulwaphulo-mthetho, uphazamisekile, ukhohlakele, ukhohlakele okanye ukhohlakele, nangoku, mntundini, akusayi kuba nosindiso.
U-Ellroy, u-Angelo ozinikeleyo osuka kwidolophu yakowabo ongafuniyo ukubala ixesha (kwaye akanamdla) ngaphaya kwe-1972 Ungumlinganiswa okanye ngaphezulu kunalawo akwiincwadi zakhe zamanoveli. Ukungabi nantlonelo, i-histrionic, evuselelayo, etshisayo kwizimvo zakhe nangamazwi akhe, i-narcissistic kunye nezityholo zokuba uphazamisekile okanye uyaphazamisa. Ezi ntsuku, ngaphandle kokuya phambili, ishiya iiperile njengezingalunganga kwezopolitiko njengangaphambili. Kungenxa yokuba ukuba kukho into engu-Ellroy ngokuchanekileyo ayilunganga ngeendlela zonke. Kwaye loo nto, kula maxesha, inesibindi kwaye iyimpumelelo.
Ubuntu bakhe budlula uncwadi lwakhe oluqaqambileyo okanye mandiyibonise. Yiba ngumlinganiswa ophambili we ibali elibi lomntu ebuntwaneni, wayenjani akazange asombulule udlwengulo nokubulala umama wakhe, Ngokuqinisekileyo kuphawula ubukho bakhe nabani na. Indlela ayenze ngayo e-Ellroy inokubonwa ngokubanzi ngaphandle kokunyanzelwa kwezi zinto zikhankanywe ngasentla Iikona zam ezimnyama. Kodwa ukuphonononga umhlaba ahlala kuwo kungcono ukuba ufunde iinoveli zakhe. Kusekho bambalwa ababhali bohlobo lwakhe abamgubungeleyo kwaye ushiye uphawu ezininzi.
Ndikunye noJo Nesbø e-Barcelona, ​​eSan Jordi, ngo-2015 (Ifoto ngu-La Vanguardia). Ndikunye noDon Winslow kule BCNegra, 2018 (Ifoto ngu-Eva Cuenca kwi-Twitter).
Inja eMad kunye nam
Amanqaku abonisa indoda enomda ekhangela iinkwenkwezi, kwaye ifikelela phantse kuzo zonke. Imida idlulile ngonyamezelo olunomsindo. Ubulungisa, ukungaziwa, ngaphandle kokunyuswa okanye ubuqaqawuli. […] UWendell Bud White ubonwe okokuqala.
UJames ellroy - Imfihlo ye-LA (1990)
Ukuwa kwam kwiiHele nguEllroy yenzeke ekuqaleni kweli waka leminyaka. Yayenzelwe Imfihlo ye-LA, ngu-Curtis Hanson (1997), endandingayiboni kumdlalo bhanyabhanya ngela xesha, kodwa ngo-2000. Ukusukela ngoko ndaye ndaphelelwa lixesha lokuya apho. Kodwa Eyona yayiyimpazamo yakhe:
Ukuba ukutolika ukuba ngelo xesha akwaziwa URussell Crowe Ngaba uMhlophe wayengathethi Ukudubula kwintliziyo eyandiqhekeza ngokoqobo ukuza kuthi ga ngoku, okwangoku ngekhe ndibhale la magama. Kwaye umphefumlo wam wawungayi kuphazamiseka ngokupheleleyo xa "ndawubona" ​​ekudalweni kwawo kwasekuqaleni. UMnu Crowe unetyala ngenxa yezinto ezininzi ebomini bam. Eyona nto ibalaseleyo yayikukuboleka ubuso nomzimba kumlinganiswa ononcwadi ogqwesa kuluhlu lweshumi elithe landichukumisa kakhulu kubunzulu boncwadi.
UBud White ngowam oyena nobumba wendoda enoncwadi olunokunditsala kakhulu kwaye ubambe. Ezigcwele imiphetho, cUmahluko ogqibeleleyo wobundlongondlongo kunye nobundlobongela obujoliswe kwimvelaphi yokuhlushwa kunye neemvakalelo ezixubileyo, evuselela eyona nto ndiyithandayo. Kuba kutheni uyikhanyela, ndingumfundi kunye nombhali ongalunganga kwezopolitiko. Andikwazi ukunceda. Sonke sinecala lethu elimnyama kwaye eyam ayinakukuphepha ukunikezela inoveli kwithoni Intsomi yabalandeli ejikeleza ngokulahlwa kwabasebenzi.
Kodwa kukwa ...
emva kokufunda Imfihlo ye-LA, bonke abanye bawa, balandelwa kwaye benyanzelwa, kuba ndibanjwe yileyondlela yokubalisa uEllroy, ukuba isitayile kunzima ngamanye amaxesha, ukufuthanisela, umpu ongaphantsi osusa iimbumbulu kufutshane. Isitayile esinokukongamela, phantse sibe nesiyezi, sikongamele ubunzima bokubaliswa kwaso. Ayifanelekanga kubo bonke abaphulaphuli, nkqu nakubo bonke abalandeli belo hlobo. Kwaye kunjalo ayizifanelanga izisu eziethe-ethe. Kongezwe iziqwenga eziliwaka kunye neeplatfoliyo, amawaka abalinganiswa bokwenyani nabanentsomi abasebenzisana kunye ne-epicenter kwesona sixeko sinemiboniso bhanyabhanya ukuze ezo ndawo zikhohlakeleyo, ezingeyonyani okanye ezingafunekiyo zenzeke.
I-40 kunye neyabo IMnyama Dahlias, 50 kunye IKrisimesi egazini kaSomandla yeLAPD nomphathi wakhe odumileyo, uWilliam H. Parker. I-60s kunye ne-aura efanayo yobungcwele kunye nenkohlakalo JFK. I-FBI ye U-EJ Hoover, tycoon Howard Hughes, imikhosi USam Giancana, uMickey Cohen, iSanto Trafficante okanye uJack Dragna. El Igolide hollywood Kwaye kugcwele amanyundululu, uluhlu lwabasenator McCarthy, ingxaki yemijukujelwa, imishini eyimfihlo yokungena Tyhubha yee-mercenaries zeCIA ... Eyona nto ibaluleke kakhulu kwiNyakatho ye-Amerika ye-XNUMX uxelelwe kaninzi-njalo kulungelelwaniso olungathandekiyo kwibali lalo, njenge-Ellroy's.
umcuphi UFritz umdaka, amagosa asebupoliseni Bucky Bleichert kunye noLee Blanchard, USargeant ULloyd Hopkins, ezoyikekayo UPete bondurant, nguCaptain Dudley Smith, iarhente Dwight intsingiselo yesinti, la Ukumkanikazi Olubomvu, wobuthixo Ichibi laseVeronica ngamehlo ehenyukazi ULynn bracken, umbulali wendlela omkhulu. Kwaye okuninzi ngakumbi, kuba kukho amawaka abalinganiswa abakhulu abadalwe yile nja inkulu yokubhala evela kwisixeko esigcwele iingelosi eziwileyo.
Kodwa ngaphezu kwako konke, ukuba umntu uyaziqhayisa ngokuba ngumfundi omnyama wohlobo, U-Ellroy yenye yezinto eziyimfuneko. Ungaqala ngolwakhiwo lwakudala kunye nophuhliso, njengowokuqala. I-trilogy kaSergeant Hopkins ayisosiqalo esibi. Kodwa, kunjalo, UMnyama Dahlia. Kwaye ke i-Quartet ye-LA izihloko ngakumbi, masithi, zingonwabisi okanye zinzima, kum: Umbulali wendlela o Abathandathu bamagrats.
Iimfuneko zeBrown. Kukho Ukulungiswa kwefilimu Ngo-1998 eneenkwenkwezi uMichael Rooker.
Apho uya khona: indawo yokugcina izidumbu
Uyaphambana malunga nedonna
ULloyd Hopkins Trilogy
Quartet yaseLos Angeles
UMnyama Dahlia. UBrian De Palma wayilungelelanisa nomdlalo bhanyabhanya e 2006.
Ikota yesibini yeLos Angeles
Esi saqhwithi (Kuza ngokukhawuleza)
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ababhali » UJames Ellroy, uPepe Carvalho Award kwi-BCNegra. Inja eMad kunye nam
IXosé D yesiFrentshi iDiéguez sitsho
Ndiyavuyisana nawe kwiphepha lakho. Ukusuka eArgentina. Ndiyathemba ukuba ngenye imini uyakuthetha ngencwadi yam
Phendula uXosé D French Diéguez
UCharles Dickens. Umhla wokuzalwa wenoveli enkulu yesiNgesi yenkulungwane ye-XNUMX